Aas aaskii kooxda Baraha Bulshada - CBB | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa 4-tii sano ee ay shaqeyneysay dowlada iminka waqtigeedu dhacay soo if baxay dhaqan aysan Soomaalidu caado u lahayn, waxana Baraha Bulshada buux dhaafiyey rag si bareera u aflagaadeynaya madaxdii dalka soo martay iyo siyaasiinta ka ra'yiga duwan Kooxda Villa Somalia.
10-kii Bishii march ee sanadkii 2017-kii ayey ahayd markii ugu horeysay ee kooxdan falaagada ah lagu arko Baraha Bulshada, markaasoo ay iska dhigayeen waddaniyiin ama dad dalka ay laxe jeclo gaar ah ka heyso.
Qorshaha Aas aaskooda oo ay wateen Madaxweynaha Waqtigiisu dhamaaday Farmaajo iyo Taliyihii hore ee Hay'adda Sirdoonka Qaranka Fahad Yaasiin, ayey u gudbiyeen Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo xafiiska joogay wax ka yar 25 maalmood.
Labadan nin oo waqtigaasi aaminsanaa in kooxdan ay soo jiidan karto dareenka Shacabka Soomaaliyeed ayuu go'aankooda si fudud u aqbalay Kheyre oo markaasi saaxada siyaasada ku cusbaa, aqoon badana aan u lahayn dhaawaca ay arintaasi u gaysan karto hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya.
Waxaa durbadiiba ay u qoreen gunno yar, taasoo ay rumeysnayeen Farmaajo iyo Fahad in ay ku qiima dili karaan siyaasiyiinti kursiga uga horeysay ee ka mudnaa ixtiraamka.
Kooxdan ayaa bilawday aflagaadeynta iyo sumcad dilka ay ku sameynayaan Madaxweynayashii dalka soo maray iyo siyaasyiinta kale ee aan ayidsaneyn siyaasada habowga ah ee ay wataan Farmaajo iyo saaxiibkiisa qarsoon ee shaashada danbe wax uga yeeriya.
Kooxdan ku dagaalanta mareegta facebook-ga ayaa dhaleeceyn kula dhaqaaqi jiray hadba siyaasiga xilka iska casila ama midka ay mowqifkiisa siyaasadeed uga soo horjeestaan Farmaajo iyo Fahad, iyagoo shacabka ugu fasirayey qofkaasi inuu yahay qaa'inul wadan, waxana ay inta badan adeegsan jireen kalmad caan-baxday oo ah Qaran Dumis.
Waxey erayadaasi xanafta leh ku tilmaameen siyaasiyiinta kala ah Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif, Prof Jawaari, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur, Mahad Salaad, Axmed Fiqi, Saciid Cabdilaahi Dani, Axmed Madoobe Axmed Ducaalle Xaaf, iyagoo marki uu xilka iska casilay Ra'iisul Wasaarihii qorshaha aas aaskooda wax ka ogaana ugu yeeray kalmadahaasi iyo kuwa ka daran.
Kooxdan oo u badan dad aqoon iyo maadi ka araladan ayey Madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday iyo Fahad Yaasiin u adeegsan jireen cid walba oo ay ka waayeen rabitaankooda gurcan amaba ka hor timaada godka ay ku wadaan dowladnimada Soomaaliya
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo ah qofka ay inta badan sida aadka ah u weerari jireen ayaa u bixiyey Magaca CBB oo uu la jeeday Cayayaanka Baraha Bulshada, maadaama midkiiba uu leeyahay wax ka badan 20 cinwaan oo uu siyaasiyiinta ku aflagaadeeyo.
Wixii intaasi ka danbeeyey bulshada ayaa ku baraarugtay qatartooda, waxana ay taasi dhalisay in intooda badan laga jarto dhaqaalihii, maadaama uu fashilmay qorshihii ay soo abaabushay Villa Somalia ee ahaa keligii wadani.
Dhawaan waxaa warbaahinta ka soo muuqday mid ka mid ah dadkii ka tirsanaa kooxdaasi, kaasoo lagu magacaabo C/nasir Zolla, waxana uu meel fagaaro ah ka sheegay in qorshahaasi uu noqday mid dhicisoobay, isagoo cafis weydiistay Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir iyo siyaasiyiintii kale ee uu u gafay intuu ka tirsanaa fallaagadaasi.
Hase ahaatee ilaa Xilligan Villa Somalia ayuu ku jiraa damacaasi, iyagoo dhaqaale siiya tira dadkaasi ka mid ah iyo xarumo warbaahin, kuwaasoo weerara Siyaasiinta ka fakirka duwan hoggaanka uu waqtigiisu dhamaaday ee sida sharci darrada ku fadhiya Madaxtooyada.
Dowlada iminka waqtigeedu dhacay ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dowladihii ugu nidaamka qaribnaa ee Soomaaliya soo mara 20-kii sano ee ugu danbeysay,waxana marka laga soo tago falalka guracan ee ay baraha bulshada ka wado, ay sidoo kale ku guul dareysatay in ay dalka gaarsiiso doorasho lagu kala baxo.